IZINTO EZILI-11 OZIFUNDAYO KWIBHOLA EKHATYWAYO UKUZE UBOMI BUBE NGCONO - UNXIBELELWANO
Izinto ezili-11 ozifundayo kwibhola ekhatywayo ukuze uBomi bube ngcono
Ibhola ekhatywayo ngumdlalo ongalindelekanga. Ukuba awundikholelwa buza nje kuJoe Theismann. Ibhola ekhatywayo ibonelela ngesenzo sakho esihlalweni kodwa ukuba uyayimamela inokukufundisa nezifundo ezibalulekileyo ngobomi bakho.
1. Udinga italente nentliziyo ukuze uphumelele nantoni na
Ngamanye amaxesha ukulunga nje akulunganga ngokwaneleyo. Unokuba netalente kwinto ethile kwaye unabo obo buchule bendalo kodwa ukuba awukhathali kwaye awunasizathu okanye intliziyo, awusoze ube nanto. Vele ubuze naliphi na kula maqela .
2. Zonke zinokuphela ngephanyazo
Akukho nto ibonisa oku ngaphezu kwale kaJoe Theismann esele ikhankanyiwe. Ipro Bowler yexesha ezimbini kunye nento eyayilingana nomsebenzi weHolo yoDumo. Ngenye imini ngelishwa, u-Lawrence Taylor wamophula umlenze kwaye wawuyeka umsebenzi wakhe. Ndiyabulela kwisibetho esincinci senhlanhla, u-Theismann waphulukana namandla akhe okudlala ibhola ekhatywayo kwaye sisikhumbuzo sokuxabisa into onayo kuba inokuhamba ngephanyazo.
3. Ukuba ekuqaleni awuphumeleli, zama kwakhona
Linye kuphela iqela elinokuphumelela iSuper Bowl minyaka le kwaye oko kuthetha ukuba wonke umntu kufuneka ajongane nokoyiswa. Ngaba bayayeka? Hayi, bafumanisa ukuba yintoni engahambanga kakuhle, zama ukuyilungisa, kwaye uzame kwakhona kunyaka olandelayo. Esi sisifundo esihle ukuba usifunde kuba ukusilela kuyingxaki yexeshana.
4. Ukuba uzama ngokwaneleyo, ungafezekisa nantoni na
Kukho abadlali abangenakubalwa abanamabali abonisa oku kodwa njengomlandeli weCleveland Browns, akukho nto ibetha esi sifundo ekhaya kum ngaphezulu kokuba uCleveland ephulukene neBrown. Emva kokufudukela eBaltimore, isixeko saseCleveland sasifuna ukuba iqela labo libuyele kakubi kangangokuba ekugqibeleni i-NFL yabuyisela kubo. Oko kubandakanya igama kunye nemibala yoqobo. Yayiyindibano echukumisayo eyasibonisayo ukuba ukuba uyayifuna kakubi ngokwaneleyo kwaye uzama kanzima ngokwaneleyo, iya kuthi ekugqibeleni yenzeke.Intengiso
5. Ukuphumelela kufuna ukusebenzisana
Ukususela ngosuku lokuqala kwibhola ekhatywayo ukuya kwi-NFL, abadlali bebhola bafunda isifundo esinye ngaphezu kwayo yonke enye into. Uyaphumelela njengeqela kwaye uyaphulukana njengeqela. Kubomi bokwenyani, ikwayindlela efanayo. Ukuba awukwazi ukusebenza kakuhle nabanye okanye uzama ukwenza yonke into wedwa, ekugqibeleni uza kusilela. Kuya kufuneka uthembe iqela lakho kwaye wonke umntu kufuneka enze imisebenzi yakhe ukuze wonke umntu aphumelele.
Chaza uthando ngesivakalisi esinye
6. Awunakuphumelela ngalo lonke ixesha
Akukho qela lebhola lingazange liphulukane. I-New England Patriots iphumelele imidlalo eli-18 ilandelelana ngo-2011 kodwa yaphulukana ne-Super Bowl. Nokuba ulunge kangakanani, uya kuphulukana nento kwaye kufanelekile ukuba uyilungele. Akukho mntu uphumeleleyo ngalo lonke ixesha kungoko ke kufuneka uhlengahlengise ulindelo lwakho ngokufanelekileyo.
7. Kufuneka ube nengqeqesho
Abadlali bebhola kufuneka babe noqeqesho. Xa udlala ibhola kufuneka usebenze yonke imihla ukuze ugcine umdlalo wakho. Oko kukwathetha ukuba kufuneka ujonge into oyityayo noyiselayo kwaye uya kuziphendulela ngeempazamo zakho kuba ukuba uyajija, iya kuba ziindaba zonke. Kubomi bokwenyani kuyafana. Kufuneka uhlale uqeqeshwe ngokuzivocavoca kunye nokutya okanye uya kuba nempilo. Xa ungcolisa ekhaya okanye emsebenzini, uyaphendula ngako. Ukuba awuhlali uqeqeshwa, kwenzeka izinto ezimbi. Vele ubuze Urhulumente waseOhio .Intengiso
abona bantu bonwabileyo
8. Ukufunda indlela yokuzibekela iinjongo
Abadlali bebhola baneenjongo ezintle. Ukwenza izigidi zeedola ngonyaka, ukuphumelela esinye seziganeko ezinqwenelekayo kuyo yonke imidlalo kwiSuper Bowl, kunye nokuba nekhono lomsebenzi olungileyo ziphakathi kweenjongo ezininzi ezibekwa ngabadlali bebhola ekhatywayo minyaka le. Amawakawaka abadlali beekholeji baneenjongo zokwenza i-NFL. Amashumi amawaka abadlali bebhola ekhatywayo bezikolo eziphakamileyo banenjongo yokwenza ukuba badlale ibhola yasekholejini. Kuhle kakhulu kusuku lokuqala xa umntwana egqiba kwelokuba ufuna ukudlala ibhola, ukuseta iinjongo kuqala kwaye akupheli. Sinokufunda kolo hlobo lwamabhongo.
9. Akukho nto ihlala ngonaphakade
U-Brett Favre kutshanje uzamile ukukhanyela esi sifundo iminyaka kodwa ekugqibeleni kuye kwafuneka nokuba aphose itawuli ekugqibeleni. Abadlali abakhulu bayaphakama, bayawa, bathathe umhlala phantsi kwaye yenza indawo yokutsalwa lilanga leenkwenkwezi. Imijelo yokuphumelela ifikelela esiphelweni kwaye iidynasties eziyimpumelelo ziya kuthi ekugqibeleni ziye ezantsi kumgangatho wokuma. Oku kusifundisa ukuba sonwabele iindawo eziphakamileyo ngeli xesha sinako kuba i-roller coaster yobomi iya kuthi ekugqibeleni iphume nezinto. Ukujonga ikhondo lomdlali kufana nenguqulelo efinyeziweyo yesangqa sobomi. Kuhlala kubuhlungu ukubona i-icon ithathe umhlala-phantsi okanye iqela eliphumelele ixesha elide libetha phantsi kodwa kubalulekile ukuba ukhumbule amaxesha amnandi kwaye uqaphele ukuba oku kwenzeka kuye wonke umntu ekugqibeleni.
10. Umsebenzi wakho uxhomekeke ekusebenzeni kwabanye kwaye eminye imisebenzi ixhomekeke ekusebenzeni kwakho
Oku kunokuba lulwandiso lwesifundo sokubambisana kodwa esi sifundo sisebenza kuye wonke umntu. Ukuba abadlali abadlalanga kakuhle, abaqeqeshi banetyala. Ukuba abaqeqeshi abakwazi ukukhuthaza abadlali babo, i-GM kufuneka iqeshe enye. Ukuba i-GM yenza izigqibo ezingaphumi ngaphandle, abanini bathatha indawo yakhe. Ayinamsebenzi ukuba ungubani kwiqela lebhola, umsebenzi womntu uxhomekeke kuwe. Kubomi bokwenyani yindlela efanayo. Umphathi wakho ufuna ukuba usebenze ukuze uhlale uqeshiwe. Umphathi wakhe ufuna asebenze nzima ukuze aqeshwe. Ukuba umphathi wengingqi uneendawo ezininzi kwaye akukho namnye kubo owenza kakuhle, umphathi wengingqi uyagxothwa. Ke, nelona candelo libonakala lingabalulekanga linokuba nefuthe elingathethekiyo komnye umntu. Emva kwakho konke, unokuba ne-QB engcono kumdlalo kodwa ukuba akanalo abafumanayo ngokubanzi, akanamsebenzi.Intengiso
11. Ibaluleke kakhulu into yokuba ngubani ophumeleleyo kwaye ngubani olahlekileyo
Abaphumeleleyo bayaphumelela kwaye abaphumelelanga abaphumeleli. Kwibhola ekhatywayo, abaphumeleleyo bahlawulwa imali ethe kratya. Zivela kwiindawo ezinjengeHolo loDumo. Banamakhonkco eSuper Bowl. Abaphumeleli abanazo ezo zinto. Eyona nto iphambili kuyo, ibhola kukhuphiswano kwaye ubomi abufani. Nokuba ayinakulinganiswa, kukho amanqaku agcinwa ngalo lonke ixesha kumdlalo wobomi. Ukuxelela abantwana ukuba amanqaku akanangxaki kufana nokuxelela abantwana ukuba imali ayinamsebenzi. Abakwazi ukuhlawula amatyala ngeenjongo ezintle kwaye abanakuphumelela ukuba abazi ukuba ukulahlekelwa kukuziva njani.
Abantu abaninzi abayithandi ibhola ekhatywayo. Bayijonga njengenobukrwada kwaye bakholelwa ekubeni abalandeli bayo bayangqinga. Nangona kunjalo, akunakuphikwa ukuba xa uhlalutya iimvakalelo kunye nezigqibo emva komdlalo ngokwawo, ungafunda ezona zifundo zibalulekileyo zobomi kwibhola ekhatywayo.
Ikhredithi yefoto ebonisiweyo: Ulwazi Hi ngokusebenzisa knowledgehi.com
ezona zongezwayo kwii-google docs
wazi njani ukuba umntu uyakopa
Iimuvi eziguqula ubomi bakho
sizakutya phi ngobu busuku
andinanto yakwenza nobomi bam
kukunceda ntoni ukufunda
Kuchaphulo Olu Isilwanyana Sentlalo Umthetho Wabucala Ukufumana Iinjongo Inkuthazo